दिनेश गौतम काठमाडौं, २३ मंसिर
‘मलाई किन यहाँ राखेको ? मलाई के भएको हो ? हामी सँगै किन नबसेको ? भाइबहिनी कहाँ छन् ? म अब स्कुल जान सक्छु त ममी ?’
दुवै खुट्टा गुमाएकी प्रकृतिलाई आफ्नो खुट्टाको भन्दा पनि पढाइको चिन्ता ज्यादा छ ।
दुर्घटनास्थलबाट नजिकै पर्छ प्रकृतिको बुबाआमाको खाजाघर । बुबा नगेन्द्र दुर्घटनास्थलमा पुगे । उनी आत्तिए । चिच्याउन थाले । रुवाबासी चल्यो ।
प्रकृतिको छुट्टिएको खुट्टा लिएर कोहलपुर मेडिकल कलेजमा बुबा नगेन्द्र पुगे । उनले मूच्छित अवस्थाकी छोरीलाई अस्पताल पुर्‍याए ।
आकस्मिक कक्षमा रहेकी छोरीलाई आमा भगवतीले हेर्न सकिनन् । उनी बेहोस भइन् । अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आर्तहरूको आवाजले सबै स्तब्ध भए ।
तर, आमाबुवा छोरीसँगै काठमाडौं आउन सकेनन् । छिमेकी वैकुण्ठ गिरीको साथमा प्रकृतिलाई काठमाडौं ल्याइयो ।
‘हतारहतार हेलिकोप्टरबाट काठमाडौंको बी एन्ड बी अस्पताल ल्याइयो । छोरीको खुट्टा जोडिन्छ कि भन्ने झिनो आशा थियो प्रकृतिका अभिभावको । विडम्बना, छोरीको खुट्टा जोड्न सकिएन । थिलिएको सबै भाग काट्नुपर्‍यो,’ आमा भगवती दुःखको सुस्केरा हाल्छिन् ।
आईसीयूको अगाडि रहेकी भगवती कति बेला डाक्टरले के खबर ल्याऊलान् भनेर प्रतीक्षामा बसेकी छन् ।
घरी औषधि चाहियो, घरी रगत चाहियो । जब भित्रबाट रगत र औषधि माग्छन् । तब उनी अत्तालिन्छिन्, छोरीलाई केही त भएको होइन भनेर ? आईसीयूभित्र छोरी बेहोस छिन्, बाहिर आमा छटपटाइरहेकी छन् ।
‘नआत्तिनुस्, अब केही पनि हुँदैन भन्ने डाक्टरको आवाजले फेरि आफूलाई सम्हाल्न खोज्छिन् ।
तेक्वान्दो खेलाडी बन्ने सपना
प्रकृतिको तेकान्दो खेलाडी बन्ने सपना थियो । ‘केही दिनअघि छोरीले तेक्वान्दो खेलाडी बन्छु । म सिक्न जाऊँ ममी भनेकी थिई । दुई दिन पनि नहुँदै छोरीको खुट्टासँगै उनको तेक्वान्दो खेलाडी बन्ने सपना पनि चकनाचुर भयो,’ उनी भावशून्य हुन्छिन् ।
अतिरिक्त क्रियाकलापमा अब्बल थिइन् प्रकृति । स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदा डान्ससमेत गर्थिन् ।
आइतबारदेखि न भोक न निन्द्रा । भगवतीको परिवारमा सन्नाटा छाएको छ । छोरीलाई खुट्टा छैन भन्ने थाहा छैन । थाहा पाएपछि के भनेर सम्झाउने ? छोरीको भविष्य सम्झेर रनभुल्नमा पर्छिन् आमा भगवती ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २३, २०७६, १३:१३:००